Russia inotyisidzira kuvhara Twitter kana ikasaita maererano nekudzvinyirira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Russia inotyisidzira kuvhara Twitter kana ikasaita maererano nekudzvinyirira
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Twitter iri kunetsekana zvakanyanya nekuwedzera kuyedza kuvharira uye kupaza hurukuro dzeveruzhinji dzepamhepo
Vakuru veRussia vari kugadzirira kuisa kurambidzwa kwakazara pa Twitter
Vakuru veRussia vanoti vakaendesa pamusoro pezviuru makumi maviri nesere zvezvikumbiro zvemabasa ekutora pasi
Twitter yakurudzira kutevedzera mirairo yekutora pasi zvakataurwa kuitira kudzivirira kurambidzwa
Zvinoenderana nemishumo ichangoburwa, zviremera zveRussian Federation zviri kugadzirira kuisa kurambidzwa kwakazara pane iyo Twitter pasocial media network 'mukati memavhiki', kana iyo US social media chikuva isingaite maererano nezvinodiwa neRussia kutora pasi 'zvisiri pamutemo'.
Mutevedzeri wemukuru wevamiriri venhau veRussia, Roskomnadzor, Vadim Subbotin, akataura neChipiri kuti, kana "Twitter ikasapindura zvakakwana zvikumbiro zvedu - kana zvinhu zvikaenderera sezvazvaive - zvino mumwedzi zvichavharwa pasina kuda mutongo wedare."
Panguva imwecheteyo, akakurudzira California-yakavakirwa internet hombe kutevedzera mirairo yekutora pasi zvakatarwa kuitira kudzivirira kurambidzwa.
Pakutanga kwemwedzi uno, Roskomnadzor - mukuru wehurumende yemubatanidzwa muRussia anoona nezve kudzora, kudzivirira, uye kuona nezvezvinobuditsa nhau, akazivisa kuti ichatanga kudzora kumhanya kwetraffic paTwitter pamusoro pekupomedzerwa kuti kambani "haibvise zvisiri pamutemo."
Vakuru veRussia vanoti vakaendesa pamusoro pezviuru makumi maviri nezviviri zvekukumbira kuti zvitumire kubviswa kusvika pari zvino.
Panguva iyoyo, Roskomnadzor akanyevera kuti, kana Twitter ikatadza kutevedzera, "matanho aya anoenderera mberi achienderana nemirau, kusvika padanho rekuvhara" sevhisheni zvachose.
Mumashoko akaburitswa svondo rapfuura, hofori yenhau dzezvemagariro akati "yaiziva mishumo yekuti Twitter iri kudzikiswa zvine hungwaru uye zvisina tsarukano muRussia nekuda kwezviri pachena zvekubvisa zvemukati." Iyo tech femu yakawedzera kuti "yainetsekana zvakanyanya nekuwedzera kuyedza kuvharira uye kubaya hurukuro dzepamhepo pamhepo."
Pakutanga kwemwedzi uno, Putin weRussia akayambira kuti masocial media masaiti ari kushandiswa "kusimudzira zvisingagamuchirike zvemukati kuti vazadzikise zvavo vega" ferret "zvinangwa.